Monday February 04, 2019 - 17:51:25 in Wararka by
Wadanka aljazaa'ir ee dhaca mandiqadda maqribul islaami ee waqooyiga qaaradda Afrika ayaa looga dhawaaqay in hoggaamiyaha cutushka ah ee wadankaas Cabdi Caziiz Botafaliiqa uu markale utartami doono xilka madaxweynanimada.
Axmed Aw yaxye oo ah R/wasaaraha xukuumadda dabadhilifka aljazaa'ir ayaa xaqijiyay in Botafaliiqa oo 82 sana jir ah uu diyaar u yahay in uu markii 5-aad ka qeyb galo doorashooyinka dhici doona bisha soosocda ee Apriil "botafaliiqa wuxuu go'aansaday in uu musharax yahay maalmaha soo socdana farriin ayuu udiri doona shacabka aljazaa'ir" ayuu yiri Axmed Aw Yaxye oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Aljazaa'ir waxaana ninka lagu sheegaa in uu yahay gacanta midig ee Botafaqliiqa.
wuxuu qiray in hoggaamiyahan faasidka ah uu ka sheeganayo cudurro dhowr ah balse uu wali yahay xildoon, doorashooyin ku sheegyada aljazaa'ir oo ah kuwa ay gadaal ka riixayso dowladda Nasaarada faransiiska ayaa dhici doona 18-ka bisha abriil ee sanadkan.
Waxaa xusid mudan in Cabdi Caziiz Botafaliiqa aan lagu arkin qasriga madaxtooyada muddo bilo ah bishii lasoo dhaafay warar soo baxay ayaa sheegaya in loola cararay isbitaal kuyaal magaalada Paris ee caasimadda faransiiska halkaas oo lagula tacaalayo xaaladdiisa caafimaad.
wadanka aljazaa'ir waxaa cagan bir ah ku maamulo jeneraallo melleteri oo ucaynsan faransiiska iyo reergalbeedka waxaana jirta in taliyihii hore ee ciidamadanka wadankaas uu dhawaan sheegay in uu doorashada ka qeyb geli doono waloow uu diidmo kala kulmay taliska melleteriga wadankaas.